Tykerb (231277-92-2) -Muurayi wezvipfuva zvemuzamu | AASraw kutenga Tykerb
Tykerb (231277-92-2) -Muurayi wezamu
/Blog/garari/Tykerb (231277-92-2) -Muurayi wezamu
Posted on 07 / 18 / 2018 by 阿斯劳 akanyora garari.
1.Tykerb upfu hunokosha Hunhu.
ruvara Yakachena kana kuti inopera white Crystalline powder
Rimwe zita lapatini
Mazita ekutengeserana Tykerb naTyverb mishonga inopinda mumuromo yekenza yemazamu uye mamwe matumbo akaoma. Iyo inonzi tyrosine kinase inhibitor inokanganisa HER2 / neu uye epidermal kukura factor receptor (EGFR) nzira. Inoshandiswa muhutano hwakakonzerwa neHER2-positive kenza yemazamu. Inoshandiswa pakurapa varwere vane kenza yakakura kana metastatic yepamu iyo vane tumvere overexpress HER2 (ErbB2) .Mazhinji eUS akarovera Tyker uye kunyanya Europe neRussia inonzi Tyverb MunaNdira 2010, Tykerb akagamuchira mvumo yekukurumidza yekurapa vakadzi vanotevera postopaopausal vane hormone receptor yakanaka metastatic kenza yemazamu Lapatinib inhibits receptor receptor process nekusunga kune iyo ATP-inosunga homwe yeiyo EGFR / HER2 protein kinase domain, kudzivirira iyo-phosphorylation uye inotevera kumisikidza kwechiratidzo chiratidzo, Tykerb (lapatinib) mishonga yemukenza inoshandiswa pamwe chete nemumwe mushonga unonzi capecitabine (Xeloda) kuporesa rudzi rwakadaro rwekenza yepamusoro yakapararira yakapararira kune dzimwe nhengo dzomuviri, uye inowanzopiwa mushure mimwe mimwe mishonga yemukenza yakaedzwa pasina kukwanisa kurapwa zviratidzo
3.Iri sei Tykerb basa?
Chifuva Kuchengetedza kenza kunonyanya kuisa pakuuraya kuparadzanisa masero nokuti kamwechete yekenza yepabonde ndeyekuti inoparadzanisa nokukurumidza.Ichirongwa chekurapa ndechekutsvaga zvimwe zvikamu zve kenza yebonde masero. Kune marudzi akasiyana-siyana emakirongwa akachengetwa, anorondedzerwa muzvikamu zvitatu zvakakura. Zvimwe zvinotarisirwa kurapwa zvinotarisa pamusoro pezvikamu zvemukati uye basa rekenza yemazamu. Mishonga inoshandiswa inoshandiswa inoshandisa maserolekisi maduku anogona kupinda muchitokisi nekuvhiringidza basa remasero, zvichiita kuti vafe. Kune mhando dzakawanda dzehutano hwakarongwa hunotarisa mukati memukati memasero. Zvimwe zvinotarirwa mishonga zvinotora zvinogamuchirwa zviri kunze kwekamuri. Mishonga inobata zvinogamuchirwa inozivikanwa seye monoclonal antibodies. Antiangiogenesis inhibitors inoshandiswa mumidziyo yeropa iyo inopa okisijeni kumasero, pakupedzisira ichiita kuti masero ave nenzara.Pertuzumab inonzi monoclonal antibody iyo inotarisa kumativi kwemasero evanhu epidermal growth factor receptor 2 protein (HER2) pane kenza yemukenza, inopesana neHER2 inokonzera kenza yepamuviri yekufa. Pertuzumab inosunga pane imwe nzvimbo yeHER2 protein kupfuura trastuzumab kuitira kuti kana pertuzumab isanganiswe netrastuzumab, kuvharwa kwakakwana kweHER2 kuitika kunoitika. Mukati meHER2-positive musero wechirwere chepamu, HER2 mutezo anoshandisa zviratidzo zveprotein, zvinonzi kinases, zvichikonzera sero rinokura nekuparadzanisa zvisiri izvo. Kinases inodzora kuti masero masero anofanira kukura nekuwanda sei. Masero emukenza wepabonde ayo overexpress HER2 inogona kuita zvinhu zvakawanda, saka masero emukenza anowedzera zvakanyanya, nekukurumidza.Tykerb inoshanda nekupindira neHER2-kinases kinosangana mukati memusero, kuvhara huwandu hwemasero echeperesi emvere edzimba dzinofanira kukura nekuwanda . Nokuderedza huwandu hwemasimba, Tykerb inogona kuderedza kana kumira kukura kwekenza yemazamu.
4.Will Tykerb Inoshanda Kwauri Here?
Zvimwe zviyero zvakasiyana siyana zvinogona kushandiswa kuona kana kenza iHER2-positive uye kana ichangopindura Tykerb:
IHC ndiyo bvunzo inonyanyo shandiswa kuona kana bundu riine yakawandisa yeiyo HER2 receptor protein pamusoro pemasero ekenza. IHC bvunzo inopa mamakisi e0 kusvika ku3+ anoratidza huwandu hweHER2 receptor protein mumatumbu. Kana bundu racho rakaita 0 kusvika 1+, rakanzi “HER2 negative.” Kana ikawana zvibodzwa zviviri kana zvitatu kana kupfuura, inonzi “HER2 yakanaka.” Vakadzi vane IHC yakanaka zvibodzwa vanofarira kupindura zvakanaka Tykerb. Iyo mishonga haifaniri kutaridzika kuti inoshanda kumakumbo neHC scores ye 0 kana 1 +.
Chiyero cheFISH chinotarisa HER2 geni risingakoshi. Uyu muedzo ndiyo yakarurama kupfuura dzose, asi shoma iripo, nzira yekuziva kana chifuva chemazamu chinogona kupindura kuTykerb ..
Neyedzo yeFISH, unowana mamaki e "positive" kana "negative" (zvimwe zvipatara zvinodaidza kuti "zero"). Kana kenza iri FISH yakanaka, inogona kupindura Tykerb.
SPOT-Chiedza HER2 CISH
Iyo SpoT-Chiedza HER2 CISH bvunzo inotarisa maHER2 mageneti mune yekenza yemazamu tishu sampuro. Iyo SpoT-Chiedza bvunzo inoshandisa chivara chinoita kuti HER2 / neu majini achinje ruvara.Neiyo SpoT-Chiedza bvunzo, iwe unowana mamaki eanogona kana "akanaka" kana "asina." Kana kenza iri SPoT-Chiedza chakanaka, inogona kupindura zvakanaka kuna Tykerb.
Taura HER2 Dual ISH (In Situ Hybridization)
Inodzidzisa HER2 Dual ISH test inoshandisa tsvina inokosha inobatsira HER2 mapuroteni kuchinja ruvara. Iyo tsvina inoshandiswa kumucheche wekenza yemazamu sampu uye inotariswa pasi pe microscope. Uyu muedzo unopa mhinduro yakajeka kupfuura yeHI HER HER. Kana uchizivisa HER2 Dual ISH muedzo, unowana chikamu che "HER2 positive" kana "HER2 chakaipa."
5.Tykerb inoshandiswa sei nemishonga?
Tykerb inogadziriswa neiyo enzyme yechiropa CYP3A4. Zvinodhaka zvinodzivisa kana kukurudzira CYP3A4 zvinogona kukanganisa kusangana kweTykerb mumuviri. Inhibitors inowedzera huwandu hweropa hweTykerb uye inducers inoderedza huwandu hweropa. Dose kugadziriswa kweTykerb kunofanirwa kutariswa kune varwere vanogamuchira yakasimba CYP3A4 inhibitors kana inducers. Zvinotevera hazvisi rondedzero yakazara yeanhibitors uye inducers.
Common divi zvinokonzerwa yeTykerb inosanganisira:
kushungurudza, kutsamwisa, kushungurudza mudumbu, maronda emuromo, kuputika, ganda rakaoma, kurwadziwa kana kuregera pamichindwe emaoko ako kana zviso zvemakumbo ako, kurasikirwa bvudzi, matambudziko neminwe yako kana zvigunwe, kubatana kurara.When Tykerb inopiwa ne Xeloda chemotherapy , iwe unogonawo kuwana chemotherapy madhara. Kunyanya, Xeloda inobatanidza neuropathy, kana kubwinya uye kumira mumaoko nemakumbo. Kana Tykerb inopiwa naVa Femara, iwewo unogona kunge une Femara madhara. Zvinokonzerwa nemagumisiro eHomara mapfupa ari mapfupa uye mapfupa uye marwadzo akabatana.Tykerb haifaniri kunge inokonzera zvinetso zvakanyanya zvemwoyo nemapapu zvinosangana naHerceptin.Kana iwe ukava nepamuviri kana kufunga kuti unogona kuva nepamuviri, udza chiremba wako. Hazvizivikanwe kana ichi chirwere chinopinda mumukaka wemvere. Nemhaka yeiyo inogona kuisa mucheche kumucheche, kuyamwa panguva yekushandisa iyi zvinodhaka hazvikurudzirwi.
7. Ndezvipi zvinonyeverwa nezvinochengetedzwa zveTykerb?
Tykerb inogona kukanganisa kuti moyo unopisa sei ropa. Iva nechokwadi chechidimbu chinosara chikamu chinokonzerwa ne ventricular (LVEF) usati watanga Tykerb uye unoramba uchicherechedza panguva yekurapa.
Tykerb haigoni kuita kuti chiropa chisabatsire. Chengetedza chiropa mushure mekurapa uye mavhiki ose e4-6 panguva yekurapa.
Tykerb inogona kukonzera chirwere. Kana chirwere ichi chikaitika, shandisa ma anti-diarrheal agents uye kushandiswa kwemvura.
Tykerb inogona kukonzera matambudziko emapapu akaipa. Rega Tykerb kana zviratidzo zveizvi zvichiitika.
Tykerb inogona kukonzera kugadzikana kweganda zvakanyanya. Rega Tykerb kana izvi zvichiitika.
8.Ndechipi chiyero cheTykerb?
Tykerb inopihwa se250 mg mapiritsi. Mahwendefa mashanu anotorwa kamwe chete zuva nezuva pazuva rega rega mudumbu risina chinhu kwemazuva makumi maviri nerimwe mukutenderera kwemazuva makumi maviri nerimwe. Usapwanya kana kutsenga mapiritsi. Chengetera pane tembiricha yemukati uye chengeta mudziyo wakavharwa zvakatsiga. T Tykerb inopihwa neXeloda (capecitabine) 21mg / m21 / zuva rinotarisirwa nemuromo mu2000 yakakamurwa doses, maawa 2 akaparadzaniswa kwemazuva ekutanga e2 21-day chirwere chekurapa. Capecitabine inofanira kutorwa nechingwa kana maminitsi 30 mushure mekudya.
Tora mishonga iyi sezvakanyorwa nechiremba wako. Tevera mazano ekunyorwa kwechiraira yako zvakanyatsonaka.
Nhamba iyo chiremba wako anokurudzira inogona kubva pane zvinotevera:
mamiriro ezvinhu ari kubatwa
zvimwe zvirwere zvamunazvo
mamwe mishonga yauri kutora
kuti iwe unopindura sei mishonga iyi
kuremera kwako, kukwirira kwako, zera rako, uhu hwako
Iyo yakakurudzirwa muyero we lapatinib yekenza yepamusoro kana yemastastatic yemazamu ndeye 1,250 mg (mapiritsi mashanu) anopiwa nemuromo kamwe zuva nezuva paMazuva 5-1. (Mahwendefa matanhatu) anopiwa nemuromo kamwe zuva nezuva achienderera mberi akabatana ne letrozole.
9.Chii mutengo weTykerb?
Avhareji Wholesale Price: $ 30.10 ne 250 mg tablet
10.Tykerb inoshandiswa sei nemishonga?
Tykerb inoshandiswa nechiropa chechiropa CYP3A4. Zvinodhaka zvinodzivisa kana kubudisa CYP3A4 zvinogona kukanganisa kuwanda kweTykerb mumuviri. Inhibitors inowedzera ropa reTykerb uye inducers inoderedza ropa rayo. Dose kuchinja kweTykerb kunofanira kufungwa kune varwere vanowana simba CYP3A4 inhibitors kana inducers. Izvo zvinotevera hazvirevi runyoro rwakakwana rwe inhibitors uye inducers.
Inhibitors: ketoconazole, clarithromycin, atazanavir, nefazodone, nelfinavir (Viracept), telithromycin, uye voriconazole.
Inducers: dexamethasone, phenytoin, carbamazepine, rifampin, phenobarbital, uye St John's wort.
11.Chiiko kana ini ndikadarika?
Kana iwe overdoes lapatinib, fonera chiremba wako kana nzvimbo inodzora chepfu, kana enda kuchipatara chiri padyo nechipatara. Tora mahwendefa epatatinib newe pazvinogoneka.
12.Ndipi pandingawana mamwe mashoko?
Yeuka, chengetedza iyi nemimwe mishonga yose kubva pakusvika kwevana, usataurire mishonga yako kune vamwe, uye shandisa mishonga iyi chete nokuda kwechiratidzo chinorayirwa.
Kuedza kwese kwakaitwa kuve nechokwadi chekuti ruzivo rwunopihwa neAASraw up-to-date, uye kupedzisa, asi hapana vimbiso inoitwa kune izvozvi. Ruzivo rwezvinodhaka ruri pano runogona kunge rwuchinetsa nguva Ruzivo rweAASraw rwakanyorwa kuti rishandiswe nevashandi vezvehutano nevatengi muUnited States uye nekudaro AASraw haitenderi kuti inoshandisa kunze kweUnited States yakakodzera, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira. AASrawRuzivo rwezvinodhaka harutsigire zvinodhaka, kuongororwa varwere kana kukurudzira kurapwa. Ruzivo rweAASraw rwezvinodhaka ruzivo rwekushandisa rwakarongedzerwa kubatsira vanachiremba vanezvitambi mukuchengeta varwere vavo uye / kana kushandira vatengi vachiona sevhisi sechiwedzero kune, uye kwete chinotsiva, hunyanzvi, hunyanzvi, ruzivo uye kutonga kwevashandi vezvehutano. Kushaikwa kweyambiro kune yakapihwa mushonga kana musanganiswa wemushonga munzira ipi neipi haifanire kutorwa kuratidza kuti mushonga kana musanganiswa wezvinodhaka wakachengeteka, unoshanda kana zvakakodzera kune chero murwere. MUTSVENE hautore chero mutoro wechinhu chero chipi zvacho chehutano hwakapihwa nerubatsiro rweruzivoAASraw inopa. Ruzivo irworwo haruna kuitirwa kufukidza ese mashandisiro ekushandisa, madhairekitori, matanho ekuchengetedza, kunyevera, kusangana kwezvinodhaka, allergic reaction, kana mhedzisiro. Kana iwe uine mibvunzo nezve izvo zvinodhaka zvauri kutora, bvunza nachiremba wako, mukoti kana wemishonga.
Tsananguro Yakazara Zvakanyanya Kubva Inhibitor JZL-184 (1101854-58-3) Vatengesi Steroid yakasimba kwazvo Mibolerone (Tarisai madonhwe) paIndaneti